परिवार नियोजनको चक्की र महिला स्वास्थ्य - स्वास्थ्य - प्रकाशितः भाद्र १३, २०७५ - नारी
परिवार नियोजनको चक्की र महिला स्वास्थ्य
म १८ वर्षकी भएँ । ५ महिनाअघि मात्र मेरो विवाह भएको हो । मैले कुनै सल्लाहबिना नै परिवार नियोजनको चक्की ३० पटकभन्दा बढी प्रयोग गरिसकें । ३ महिनादेखि मेरो महिनावारीमा थोरै मात्र रगत देखिने गरेको छ र अहिले ३८ दिन भैसके पनि महिनावारी भएको छैन । मैले के गर्नुपर्ला ?
तपाईंले ५ महिनामा ३० पटकभन्दा बढी परिवार नियोजनको कुन चक्की प्रयोग गर्नुभएको हो ? प्रश्नमा उल्लेख छैन । नेपालमा सामान्यत: परिवार नियोजनका दुई किसिमका चक्की उपलब्ध छन् । एउटा नियमित खाने चक्कीमा २१ वटा सेता तथा थप ७ वटा खैरा चक्की (सबैमा नहुन सक्छ) हुन्छन् ।
यस्तो चक्की नियमित खानुपर्छ र यो प्रभावकारी तथा नवदम्पतीका लागि उपयुक्त गर्भनिरोधक मानिन्छ । तपाईंको प्रश्नका आधारमा तपाईंले प्रयोग गरेको चक्की उक्त चक्कीभन्दा पनि यौन सम्पर्कपछि प्रयोग गरिने आकस्मिक परिवार नियोजनको चक्की हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो नियमित चक्की होइन । आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीमा हार्मोनको मात्रा सामान्य चक्कीको तुलनामा निकै बढी हुन्छ र त्यसैले यो प्रभावकारी हुन्छ, तर यो आकस्मिक रूपमा, कहिलेकाहीं प्रयोग गर्नका लागि मात्र हो ।
यसलाई महिनामा यति नै पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छैन, तर बारम्बार वा धेरै प्रयोग गर्न थाले हार्मोनमा असन्तुलन देखा पर्छ । यसले गर्दा महिनावारीमा गडबडी तथा यसको प्रभावकारितामा कमी आउने हुन्छ ।
भाद्र २१, २०७६ - राष्ट्रिय महिला भलिबलको उपाधि पुलिसलाई